Gudoomiyaha iyo Maamulaha Hormuud Telecom Axmed Maxamed Yuusuf oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey qaadka lacag bixinta dhiijitaalka Somalia | Somalisan.com
Home Afsomali Gudoomiyaha iyo Maamulaha Hormuud Telecom Axmed Maxamed Yuusuf oo faahfaahin dheeraad ah...
Gudoomiyaha iyo Maamulaha Hormuud Telecom Axmed Maxamed Yuusuf oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey qaadka lacag bixinta dhiijitaalka Somalia
Soomaaliya waxay tilmaamaysaa jidka ugu horreeya ee bulshada aan lacag caddaan ahayn Fikrad ka dhiibtay Axmed Maxamed Yuusuf
Bilaabidda nidaamka lacag -bixinta qaranka ayaa u saamaxday Soomaaliya inay dhexdhexaad ka noqoto lacag -bixinta dijitaalka ah. Dalku wuxuu ku jiraa qarnigii kacaanka dhijitaalka ah, oo leh fursad u bisil qaadashada.
Muqdisho waxay caan ku ahayd oo kaliya inay rakibtay ATM -kiisii ​​ugu horreeyay sannadkii 2014 -kii, laakiin horumarka dhaqaalaha dijitaalka ee ballaaran ee Soomaaliya tan iyo markaas wuxuu ahaa mid la yaab leh. Toddoba sano ka dib, waddanku wuxuu qarka u saaran yahay inuu noqdo bulshada ugu horreysa adduunka oo aan lacag caddaan ahayn.
Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa bishii Ogosto soo bandhigay nidaam lacag -bixin oo dhexe kaas oo isku xira 13 deyn -bixiye oo dalka ah, wuxuuna dejiyaa lacag -bixinnada dhijitaalka ah, taasoo u sahlaysa bixinta dadka dalka oo dhan.
Iyada oo in ka badan saddex-meelood laba meel dhammaan lacagaha laga bixiyo Soomaaliya lagu bixiyo aaladaha lacagta moobiilka, suuqa aan wali la isticmaalin ee kaabayaasha cusub, barnaamijyada, nidaamyada lacag-bixinta iyo fintech-ka ayaa aad u weyn-ugu yaraan kuwa caqliga leh ee ku filan inay ka faa’iideystaan ​​faa’iidada ugu horreysa.
Waqtigii Covid-ka, lacag caddaan ma aha boqor, maadaama muwaadiniinta adduunka oo dhan ay si dhakhso ah u qaataan kaararka, internetka iyo barnaamijyada macaamil maaliyadeed. Noorway waxay hadda ku jirtaa bulshada ugu lacagta badan adduunka, iyada oo kaliya 4% macaamilidda hadda lagu sameeyo khadka tooska ah, sida uu sheegay Norges Bank.
Wadahadal uu dhowaan la yeeshay Guddoomiyaha Bangiga Dhexe, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi wuxuu yiri:
“Soomaalidu waxay caan ku tahay adduunyada si fiican u yaqaan ganacsigeenna. Ku darso tan dhalinyarada Soomaaliya iyo qaadashada teknolojiyadda dalka oo horumarsan, isla’egta waxay la mid tahay xarun hal -abuurnimo, taas oo ah sida ay Muqdisho noqonayso. ”
Ka soo baxaya burburka
Daaqadan fursadda ayaa imaanaysa iyadoo dalku uu gees u leexday labaatankii sano ee colaadda sokeeye.
Dalku wuxuu soo maray qaab -dhismeedyo sharci oo lagama -maarmaan ah si loo abuuro jawi ku habboon ganacsiyada, iyo in si wanaagsan loo fududeeyo maalgashiga shisheeye iyo kan gudahaba.
Waax maaliyadeed oo sii xoogaysata ayaa fursado u abuuri doonta Soomaalida gudaha iyo dibaddaba. Soomaaliya waxay hormuud u tahay hormuudka adduunka ee isticmaalka lacagta mobilada, iyadoo in ka badan 70% dadka 13m ay isticmaalaan adeegyada lacagta mobilada. Nidaamka lacag -bixinta qaranku wuxuu u noqon doonaa dhaqaale aan hore loo arag dhaqaalaha, kaas oo hore ula soo halgamay been abuur baahsan.
Si kor loogu qaado ka mid noqoshada maaliyadeed, Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa bixiyay shatigii ugu horreeyay ee lacagta mobilada ee adeegga EVC Plus ee Hormuud Telecom.
Qurba -joogta Soomaaliyeed ee u soo diraya xawaaladaha dalkooda ayaa hadda ku qanacsan in marka ay soo laabtaan ay yeelan doonaan awood maaliyadeed oo la mid ah sida ay meelo kale u heli lahaayeen. Waxaan abuureynaa Soomaaliya oo mustaqbalka dhow ka shaqeynta dibedda ay shaqo u dhaqaaqi doonto, ee aan loo baahnayn.
Tani waxay sidoo kale muujineysaa suurtagalnimada Soomaaliya ee maalgashiga shisheeye. Maalgashigu khatar ma aha, laakiin soddon sannadood ka dib dagaal sokeeye oo aad u ba’an, waddanku wuxuu ku tallaabsaday dib-u-dhiska dhaqaalihiisii ​​dagaalladu halakeeyeen. Fallaagada ka tirsan garabka al-Qaacida, al-Shabaab, waxay sii wadaa inay saameyn ku yeelato dhul baaxad leh, taasoo ka horjoogsanaysa maalgashadayaasha shisheeye
Geeska hal -abuurka
Dadkeennu waa dhallinyaro-badidoodu ka yar tahay 30-aad bay u shaqeeyaan oo waxay jecel yihiin inay naftooda ku qalabeeyaan xirfado heer sare ah. Qiyaastii 85% dadka Soomaaliyeed ayaa adeegsada lacagta mobilada marka la barbardhigo in ka yar afar toban tobankii Nigeria, dhaqaalaha ugu weyn Afrika, iyo in ka badan UK (25% 2020) iyo US (29% 2021).
Hal-abuurka ay Soomaalidu hormuudka u tahay ayaa si xowli ah u socda, dowladduna waxay sannadkii hore heshiis deyn-cafinta la gashay Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka; dhagax kale oo muhiim ah markaan ku soo noqonno dhaqaalaha adduunka.
In kasta oo ay si fiican u leedahay kartida farsamada, illaa bishaan hannaanka maaliyadeed ee Soomaaliya macnaheedu wuxuu ahaa in deyn -bixiyeyaashu ay dhex -geli karaan oo keliya heer sare. Tani waxay lacag -bixinta ka dhigtay mid aan habboonayn waxayna xoojisay ku -tiirsanaanta doolarka Mareykanka, iyadoo dib loo dhigay meheradihii doonayay inay ku koraan dalka oo dhan. Tani hadda waxay diyaar u tahay isbeddel.
Awoodda Soomaaliya ee aan weli la isticmaalin waxaa sabab u ahaa qaadashada lacagta moobaylka 10 -kii sano ee la soo dhaafay. Hormuud Telecom, oo bilawday inay ku shaqayso shabakadeeda Soomaalida 2002, hadda waxay leedahay macaamiisheeda 3.6m, waxaana la siiyay ruqsaddii ugu horreysay ee lacagta mobilada bishii Febraayo. Macaamiisheeda 3m ee ka ah madal lacagta mobilada EVC Plus waxay markhaati u tahay suurtagalnimada lacagta mobilada ee dalka, waana inay dhiirrigelisaa maalgashadayaasha si ay dib ugu soo noqdaan qaranka si kalsooni leh.
Soomaaliya ma aysan helin maalgashi shisheeye muddo 20 sano ah ilaa 2013. Maalgashadayaashii hore ayaa fahmay, in ay u arkaan Soomaaliya in ay tahay uun waddan ‘dagaal burburay’ waa aragti gaaban. Dhaqaalaha Soomaaliya ayay u badan tahay inuu kordho 2.9% sanadkan, sida ay sheegtay IMF. Iyada oo leh kaabayaasheena maaliyadeed ee cusub oo la hagaajiyay, meheraduhu ma xirnaan doonaan, lacag bixinta waa la fududeyn doonaa, waxaana rajeyneynaa inaan arki doonno ku tiirsanaanta hoos u dhaca doolarka Mareykanka.
Dhammaantood waa calaamadaha suuqa maalgashiga bislaaday. Kuwa ku baraarugsan fursadaha ka jira dalka, ee iska soo saaray dambaska dagaalka ayaa guulaysan doona.
Si uu ugu dhawaaqo Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Cabdullaahi, “Waxaan hadda diyaar u nahay inaan si dhab ah u soo dhaweyno maalgashadayaasha.”
Axmed Maxamed Yuusuf waa guddoomiyaha iyo maamulaha shabakadda ugu weyn Soomaaliya, Hormuud Telecom.
By Axmed Maxamed Yuusuf
Gudoomiyaha iyo Maamulaha Hormuud Telecom
Previous articleSomalia points the way to first cashless society An op-ed by Ahmed Mohamed Yusuf
Next articleTurufo toorayaal qayaamoolayaal dadka baad kaga Qaadi jirtay magaca Argagixisada Al-Shabaab oo
Dhageyso Maamulka Puntland Oo Sheegay In Lala Xisaabtami Doono Madaxda Maamulada Deegaanada Maamulkaas
Somalisan News - August 14, 2017
Xaafad katirsan Muqdisho oo la isku dagaalay canshuur laga qaado balka dameeraha lagu keeno...
Somalisan News - July 31, 2021
Three Most Wanted Terror Suspects Surrender To Kenyan Authorities
Somalisan News - January 22, 2019
Golaha wasiirada Malaysiya oo meel mariyey Arin dalkeena looga baahnaa
Somalisan News - December 12, 2019